Posted by Tranquillus | Feb 4, 2022 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Efa nisy teto Frantsa nanomboka tamin'ny 1 ny fampidirana ny fampihenana ny hetra amin'ny hetraer Janoary 2019. Saingy marina fa, indraindray, dia sarotra ny mahita ny lalanao amin'ny kajy. Amin'ity lahatsoratra ity, noho izany, dia hiezaka ny hahatakatra ny fomba fiasan'izy rehetra, miezaka ny ho tsotra araka izay azo atao.
Voalohany indrindra, inona no tsy miova
Amin'ny volana Mey, toy ny isan-taona, dia tsy maintsy mametraka ny tatitry ny hetra amin'ny fidiram-bola ianao amin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraseran'ny tranonkalan'ny governemanta. Noho izany dia hanambara ny vola miditra rehetra amin'ny taona teo aloha ianao, fa koa ny fandaniana sasany. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Ny fidiram-bolan'ny miasa tena
Ny fidiram-bolan'ny trano
Ny karaman'ny mpitaiza ny zanakao, ny mpikarakara trano, ny fanampiana ao an-tranonao
Mazava ho azy fa tsy feno io lisitra io.
Ny singa miova
Raha miasa ianao, misotro ronono na miasa tena, dia tsy handoa mivantana ny hetra intsony ianao. Ny mpampiasa anao na ny tahirim-bola fisotroan-drononoo, ohatra, no manala vola isam-bolana amin'ny karamanao na ny fisotroan-drononoo, ary avy eo dia mandoa izany mivantana amin'ny hetra. Ireo deduction ireo dia atao isam-bolana, izay ahafahanao manaparitaka ny fandoavana ny hetra aloa amin'ny taona. Ho an’ireo izay miasa tena, hesorina ny hetra amin’ny vola miditra rehefa manambara ny vola miditra, izany hoe isam-bolana na isam-bolana.
Rehefa mametraka ny fiverenanao isan-taona ianao, dia hamaritra ny sarany ny tompon'andraikitra amin'ny hetra mifototra amin'ny fiverenanao hetra tamin'ny taona teo aloha. Mazava ho azy fa azonao ovaina io taha io amin'ny fotoana rehetra raha tombananao fa kely kokoa na mihoatra noho ny tamin'ny taona teo aloha ianao. Ampitaina mivantana avy eo (amin'ny hetra) amin'ny mpampiasa anao (na tahirim-bola fisotroan-dronono na Pôle Emploi, sns.).
HAMAKY Fiarovana ara-tsosialy sy zon'ny mpiasa napetraka any Frantsa
Mazava ho azy fa tsy manome vaovao ny mpiasa. Ny sampandraharahan’ny hetra no mikarakara izany ary mionona amin’ny fanomezana sarany fotsiny. Na ahoana na ahoana, ny mpampiasa anao dia tsy mahafantatra ny fidiram-bola hafa, raha mandray soa avy amin'izany ianao. Misy ny tsiambaratelo tanteraka. Voasazy ihany koa ny fanambaràn'ny mpampiasa ny sarany.
Saingy, raha tianao, azonao atao ihany koa ny misafidy ny tahan'ny tsy natao manokana. Tena azo atao izany!
Marihina fa ny vola miditra sasany dia tsy tafiditra ao anatin’ny habaky ny haba, toy ny vola miditra amin’ny renivola na ny vola miditra amin’ny fiantohana aina.
Ahoana no kajy ny tahan'ny fitazonana hetra
Sarotra ny fomba kajy ary malina kokoa ny miantehitra amin'ny simulator mba hahazoana valiny marina indrindra.
Na izany aza, afaka mamintina izany toy izao isika:
Ny habetsaky ny hetra miditra dia zaraina amin'ny habetsaky ny vola miditra.
Farany, havaozina amin'ny 1 ity tahan'ny manokana ityer Septambra isan-taona araka ny fanambaranao ary io lojika io dia azo ampiharina isan-taona.
Ny tranga manokana momba ny mpiasa miampita sisintany miaraka amin'i Soisa
Raha mpiasa miampita sisintany tsy monina ianao ary miasa any amin'ny canton of Genève na Zurich, ohatra, izay efa mampihatra io hetra fitazonana io, dia tsy manahy ianao.
Amin'ny lafiny iray, raha miasa any Soisa ianao ary any Frantsa ny trano fonenanao, dia tsy maintsy mandoa vola mivantana any amin'ny Tax Administration tahaka ny nataonao teo aloha ianao.
Amin'ny maha misotro ronono any Frantsa dia mihatra amin'ny ankapobeny ny hetra fitazonana.
Ary raha nanao mihoatra ny fandoavana ny Tax Administration ?
Ny tahan'ny hetra voatazona dia kajy mifanaraka amin'ny haavon'ny fidiram-bola. Araka ny efa hitantsika teo aloha, raha miova ny toe-javatra misy anao, dia azonao atao ny manova an'io taha io amin'ny Internet ary manova azy io. Hanao ny fanitsiana ao anatin’ny 3 volana ny Fitantanana avy eo. Ny famerenam-bola dia mandeha ho azy noho ny fanambarana natao isaky ny volana Mey. Amin’ny faran’ny volana jolay na ny fiandohan’ny volana aogositra izao no hamerenana ny vola. Mandritra io vanim-potoana io dia hahazo ny filazanao momba ny hetra ihany koa ianao.
Ho an'ny fifanarahana fohy
Ny fifanarahana maharitra sy ny fifanekena vonjimaika dia iharan'ny hetra fitazonana ihany koa. Ny mpampiasa dia afaka mampiasa maridrefy mahazatra raha tsy misy ny fampitana ny tahan'ny. Azo antsoina koa hoe tahan'ny tsy miandany na tahan'ny tsy miankina. Misy mizana eo am-pelatananao:
Eto koa ianao dia manana fahafahana hanova azy amin'ny Internet amin'ny tranokala hetra.
Manana mpampiasa maro ianao
Toy izany koa ny fiasan'ny hetra fitazonana. Mitovy ihany ny taham-bolan’ny sampandraharahan’ny hetra ho an’ny tsirairay amin’izy ireo ary io taham-bola io no hampiharina amin’ny karama tsirairay.
Ny Tax Administration dia mijanona ho fifandraisanao irery
Raha manana fanontaniana ianao, raha te hanova ny toe-javatra misy anao ianao dia tokony hifandray amin'ny biraon'ny hetra mahazatra anao ihany. Ny mpampiasa anao dia manangona ny vola fotsiny fa tsy manolo ny Fitantanana.
Rehefa manome ho an'ny fikambanana ianao dia manan-jo hampihena ny hetra 66% amin'ny fanomezanao. Miaraka amin'ny deduction amin'ny loharano dia tsy manova na inona na inona izany. Manambara izany ianao isan-taona, amin'ny volana Mey, ary io vola io dia hesorina amin'ny filazanao hetra farany amin'ny Septambra.
Ny sandan'ny debit mivantana isam-bolana dia toy izao manaraka izao:
Ampitomboina amin'ny tahan'ny azo ampiharina ny vola miditra amin'ny hetra
Raha misafidy ny tahan'ny tsy miandany ianao dia ity tabilao manaraka ity no hampiasaina:
mandoa vola tahan'ny tsy miandany
Latsaky ny na mitovy amin'ny €1 0%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €404 0,50%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €457 1,50%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €551 2%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €656 3,50%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €769 4,50%
Avy amin'ny €1 ka hatramin'ny €864 6%
Manomboka amin'ny €1 ka hatramin'ny €988 7,50%
Manomboka amin'ny €2 ka hatramin'ny €578 9%
Manomboka amin'ny €2 ka hatramin'ny €797 10,50%
Manomboka amin'ny €3 ka hatramin'ny €067 12%
Manomboka amin'ny €3 ka hatramin'ny €452 14%
Manomboka amin'ny €4 ka hatramin'ny €029 16%
Manomboka amin'ny €4 ka hatramin'ny €830 18%
Manomboka amin'ny €6 ka hatramin'ny €043 20%
Manomboka amin'ny €7 ka hatramin'ny €780 24%
Manomboka amin'ny €10 ka hatramin'ny €562 28%
Manomboka amin'ny €14 ka hatramin'ny €795 33%
Manomboka amin'ny €22 ka hatramin'ny €620 38%
Avy amin'ny € 47 43%
Inona no atao hoe hetra fitazonana? 4 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaNiverina indray ny France Cybersecurity Challenge (FCSC): mitady ny masoivohony ny ekipan'i Frantsa!
manarakaNy fototry ny fitsarana heloka bevava
Fanokafana kaonty any amin’ny banky ho an’ny vahiny sy tsy monina: fombafomba rehetra